War-Saxaafadeed Waxaa qoray Maamulka FEELM 20-11-19 Faallo ka tag
Aragtida rasmiga ah ee qiiqa iyo isticmaalka nikotiinka guud ahaan wey kala duwan yihiin. Boqortooyada Ingiriiska gudaheeda, kuuskuusku waxaa aasaas ahaan dhiirigaliya hay'adaha caafimaadka ee dowladda. Sababtoo ah sigaar cabista ayaa culeys qaali ah ku ah Adeegga Caafimaadka Qaranka ee Boqortooyada Ingiriiska, waddanku wuxuu u taagan yahay inuu lacag badbaadiyo haddii kuwa cabaya ay sigaar elektaroonig ah u beddelaan. Inta badan wadamada kale sidoo kale dhammaantood ...
War-Saxaafadeed Waxaa qoray Maamulka FEELM 20-10-15 Faallo ka tag
Maaddaama qiiqu ku sii kordhayo caan, waxay u noqotey bartilmaameed dabiici ah dawladaha u baahan dakhliga canshuuraha. Sababtoo ah alaabada uumiga waxaa sida caadiga ah iibsada dadka caba sigaarka iyo sigaar cabayaashii hore, maamulka canshuuraha ayaa si sax ah u qaadanaya in lacagta ku baxday sigaarka elektaroonigga ay tahay lacag aan lagu isticmaalin soosaarka tubaakada ee soo jireenka ah. Dawladuhu waxay ku tiirsanaayeen sigaarka iyo kuwa kale ...
Hindiya: Vapers waxay ka mudaaharaadi doonaan mamnuucida Sebtember 18-guurada
War-Saxaafadeed Waxaa qoray Maamulka FEELM 20-09-10 Faallo ka tag
U-doodayaasha uumiga uumiga ayaa qaban doona mudaaharaadyo isku mar dalka oo dhan ka dhacaya Jimcaha, Sebtember 18, si loo xuso hal sano tan iyo markii dowladda Hindiya mamnuucday iibinta alaabada uumiga. Munaasabadan waxaa soo qabanqaabinaya Ururka Vapers India (AVI). "Waxaan soo ururinaynaa qashin-wadayaal si aan kor ugu qaadno diidmadayada ka soo horjeedka xannibaadda sharci darrada ah ee ay ...
War-Saxaafadeed Waxaa qoray Maamulka FEELM 20-08-23 Faallo ka tag
Natiijooyinka sahaminta cusub ee ay soo saartay CDC waxay muujineysaa hoos udhac boqolkiiba 29 ah oo kudhaca dhallinyartii laga soo bilaabo 2019 ilaa 2020, taasoo keeneysa heerarkii ugu dambeeyay ee la arkay kahor 2018. Dabcan, CDC iyo FDA waxay doorteen qaab kale oo lagu soo bandhigo natiijooyinka. Natiijooyinka la xushay (laakiin aan ahayn xogta ay ka yimaadeen) waxay qayb ka ahaayeen warbixin CDC ah oo la daabacay Sebtember 9 — isla maalintaas oo ahayd ...
Sigaar Cabbida, Sigaar kuleylka, Epen, E Xidhmada Sigaarka Bacaha, E Sigaarka Uumiga Liibiya, Newport E Sigaar,